के अगरबत्तिको धूवाँ चुरोटको धूवाँभन्दा पनि हानिकारक छ ?
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्य स्वास्थ्य जीवनशैलीके अगरबत्तिको धूवाँ चुरोटको धूवाँभन्दा पनि हानिकारक छ ?
विराटनगर, ५ असोज । पूजा गर्ने बेलामा होस् वा कोठालाई सुगन्धित बनाउनका लागि अगरबत्तिलाई दैनिक रूपमा प्रयोग गरिने वस्तु हो । पूजापाठमा अगरबत्तिलाई अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । पूजाआजामा मात्र नभएर बिहान र बेलुका नियमित रूपमा अगरबत्ति सल्काउने अधिकांशको घरमा चलन नै छ ।
अगरबत्ति अध्यात्मको प्रतीक हो जसको प्रयोगले शान्ति र सुख दर्शाउनुका साथै यसको मिठो सुगन्धले मनलाई आनन्द महसूस गराउने गर्छ । तर, दैनिक अगरबत्तिको प्रयोग गर्दा निस्किने अगरबत्तिको धूवाँले स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउने एक अध्ययनका अनुसार वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् ।
‘स्प्रिन्जर्स जर्नल इन्भाइरनमेन्टल केमेस्ट्रिी लेटर्स’मा प्रकाशित गरिएको सन् २०१५ को एक चाइनिज अध्ययनमा अगरबत्ति र चुरोटबाट निस्किने धुवाँको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा अगरबत्तिमा धेरै मात्रामा हानिकारक केमिकल्सको प्रयोग हुने पाइएको छ । अध्ययनले अगरबत्तिमा भएको केही हानिकारक केमिकल्स चुरोटमा समेत पाइने देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार नजिकै छेउछाउमा बाल्ने अगरबत्तिको प्रयोगले डिएनएमा परिवर्तन ल्याएर शरीरमा विभिन्न प्रकारको रोगलाई निम्त्याउन सक्छ ।
अध्ययनकर्ताले यसमा म्युटाजेनिक, जेनोटोक्सिक र साइटोक्सिक जस्ता टोक्सिन पाइन्छ, जसले शरीरमा विषको जस्तो काम गर्ने पत्ता लगाएका छन् । अगरबत्तिको धूवाँले मात्र पनि एक सामान्य चुरोट नखाने मान्छेलाई क्यान्सर, ब्रेन ट्यूमर र फोक्सोका रोगहरू निमत्याउन सक्छ भन्ने उक्त अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ । अगरबत्तिका कणहरूमा ६४ प्रकारका तत्त्व हुने भएकाले यसले श्वासप्रश्वास नलीमा जलन गराएर अगरबत्तिको धूवाँ फोक्सोमा बस्न गइ इन्फ्लामेटरी रियाक्सन पनि गराउन सक्ने बताएको छ ।
साथै, अगरबत्तिमा पाइने थप विभिन्न तत्त्वहरूले शरीरलाई हानी पुर्याउने अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययनकर्ताहरूले अगरबत्तिको प्रयोग सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर, अगरबत्तिको धूवाँ चुरोट र खैनीभन्दा पनि हानिकारक छ या छैन भनेर अझै पनि यकिनका साथ अध्ययनले पत्ता लगाउन सकेको छैन् । ब्रिटिश लङ्ग फाउन्डेसनका चिकित्सकीय सल्लाहकार डाक्टर निक रोबिन्सनले अध्ययनमाथि टिप्पणी गर्दै ४ वटा अगरबत्ति र एक चुरोटमा गरिएको तुलनात्मक अध्ययनबाट यस विषयमा सहजै सामान्यीकरण भने गर्न नसकिने बताए ।